ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု၊ ရက်ရောမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်း၊ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်း၊ အခြားသူများ၏အမှားများ၊ စကြဝuniversalာသနားကြင်နာမှု၊ ကျိုးနွံခြင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းများအကြောင်းမပြောတတ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ စွမ်းအား၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ စင်ကြယ်မှု၊ သမ္မာသတိ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊
-Bhagavad-Gita ။ ch ။ xvi ။
vol ။ 1 ဒီဇင်ဘာ, 1904 ။ အမှတ် 3
HW PERCIVAL နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်, 1904 ။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင်ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှစ၍ နေ့ရက်များတိုတောင်းလာသည့်နေသည်ဆယ့်နှစ်ရာသီဥတုဒသမနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သော capricorn တွင်ဆောင်းရာသီနေအစပြုသည်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သုံးရက်ကြာဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုရှေးခေတ်မှမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဆယ်ပဉ္စမအစဖြစ်သော ၂၄ နှစ်မြောက်ညသန်းခေါင်အချိန်၌ကြယ်စုအုပ္စု (ဗာဂျီးနီးယားသို့မဟုတ်အပျို) ဟုခေါ်သောကြယ်စုဟုခေါ်သည့်ကြယ်စုသည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်မှထ။ ချီးမွမ်းသီချင်းများကြွေးကြော်ကြသည်။ နေ့၏ဘုရားသခင်မွေးဖွားကြောင်းကြေညာ; သူသည်မှောင်မိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်သေခြင်းမှလောက၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်ရောမများသည်နေ့၏ဘုရားသခင်မွေးဖွားခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်သူတို့၏နေရောင်ခြည်ပွဲတော်ကျင်းပသောရွှင်လန်းမှုပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြပြီးဆပ်ကပ်ပွဲ၌အားကစားပွဲများသည်အလွန်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြသည်။
ဒီနေ့ဘုရားသခင့်ကယ်တင်ရှင်၊ ကလေးသည် Isis အပျိုစင်မိမိကိုယ်ကိုမိခင်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ “ ငါဘွားမြင်သောအသီးသည်နေ၏။ - ဒီရေသည်ရောမများသာမကခေတ်သစ်ရှေးခေတ်များကဂုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပြီးစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောဗာဂျီးနီးယား - သဘာဝ - အိုက်စ် - မာယာ - မာရီ - မာရိအားနေ့၏ဘုရားသခင့်ဖြောင့်မတ်သောနေကိုမွေးဖွားခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လောက၏ကယ်တင်ရှင်။
မတူကွဲပြားသောလူမျိုးများကမွေးရပ်မြေကိုကွဲပြားခြားနားစွာဖော်ပြထားသည်။ အီဂျစ်လူမျိုးများက၎င်းကိုဂူသို့မဟုတ်အခေါင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောဆိုကြသည်။ နက်နဲသောအရာရှိသမျှတို့အထဲ၌တစ်ခုချင်းစီ၏အတွေးအခေါ်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာသန့်ရှင်းရာဌာနသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်သောဂူမှအစပြု၊ နှစ်ကြိမ်မွေးဖွားခြင်း၊ ဘုန်းထင်ရှားခြင်းမွေးဖွားလာခြင်းနှင့်ကမ္ဘာသို့ သွား၍ ဟောပြောရန်တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင်ကြားရေးနှင့်ဝမ်းနည်းစိတျပူပနှစျသိမျ့သူ့ကိုခဲ့သည့်သမ္မာတရားအလင်းဖြင့်; နာမကျန်းဖြစ်နေသူနှင့်ခြေဆွံ့သူများကိုကုသရန်နှင့်လူသေများကိုမိုက်မဲသောသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်။
နေသည်ခရစ်တော်၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီးဗဟို၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်မမြင်ရသောနေ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရှိနေခြင်းသည်၎င်းကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်သေခြင်းမှကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဂြိုလ်များသည်မြင်နိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကြာ ၀ asာအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်တည်ရှိစေသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်စကြာ ၀ lastာတည်မြဲနေချိန်အတွင်း၌ ၀ ိညာဉ်နေသည်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုခံစားရစေသည်။ ထို့ကြောင့်နေ၏ဖြစ်စဉ်များသည်ဤခရစ်တော်၏နိယာမသည်လူ၏သိစိတ်ကိုပြသနိုင်သည့်အချိန်နှင့်ရာသီကိုညွှန်ပြသည်။ နှင့်ခရစ်စမတ်ရာသီမြင့်မြတ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာနက်နဲသောအရာ၌ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓ၊ ကရစ္စနား၊ ဟောရတ်စ်၊ ဟယ်ကလီးစ် (သို့) ကမ္ဘာ့ကယ်တင်ရှင်တစ် ဦး ဦး ၏မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ရပ်သည်ထူးခြား။ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဆယ့်နှစ်ရာသီနိမိတ်လက္ခဏာများမှတဆင့်နေ၏ခရီး။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောtheဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်း၊ တန်ခိုးနှင့်တန်ခိုးတိုးပွားခြင်း၊ သက်သာခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီးကိုထွန်းကားစေခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရသည်။ တန်ခိုးတော်နှင့်ဘုန်းအသရေ၌အသစ်ပြုပြင်တော်မူ။ ၊ ဤအချက်ကိုငြင်းဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသိပညာကိုကြေငြာခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုသည်းမခံခြင်း၊
“ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်း၏ကတိတော်များကိုပျောက်ကွယ်သွားစေမည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသင့်သည်” ဟုဂိုဏ်းဂဏဂိုဏ်းမှစိုးရိမ်တကြီးနှင့်ကြောက်ရွံ့စွာညည်းညူပြောဆိုသည်။ သူသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟုသူယူဆသောသူ၏နှလုံးနှင့်သူပေးသောနာကျင်မှုနှင့်သူယုံကြည်သူထံမှဖယ်ရှားပစ်သောမျှော်လင့်ချက်ကိုမတွေးတောခြင်း၏ဤအချက်ကိုဝန်ခံပါ။ သင်သည်ဂိုဏ်းဂဏအားလုံးနှင့်ဘာသာတရားများ၏ပျက်စီးခြင်းကိုအသံထွက်ပါလိမ့်မည်။ နေရောင်အောက်၌မိုa်းပွင့်ကဲ့သို့၎င်း၊
ဂိုဏ်းဂဏစွဲနှင့်ရုပ်ဝါဒဆန်သောနှစ် ဦး စလုံးအားကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားသည် - အလင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့စပ်ကြားတည်ဆောက်ထားသည့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းလင်းစွာထားခဲ့သင့်သည်။ အမှောင်ထုထဲမှာမမြင်ရတဲ့နဂါးတွေရှိနေတယ်။ သို့သော်အမှန်တရားအချို့ကိုဘာသာရေးဝါဒီနှင့်ရုပ်ဝါဒလိုက်စားသူများကဖော်ပြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို, သို့သော်, တစ် ဦး အစွန်းရောက်ဖြစ်၏ တစ်ခုချင်းစီကသူ့အမှားကိုလက်ခံယုံကြည်ရန်နှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်သို့ပြောင်းလဲရန်သူ၏ကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ သူတို့အတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသည်။ တစ်ယောက်ချင်းစီသည်မိမိကိုယ်ကိုနေရာတွင်နေရာချထားမည်ဆိုလျှင်သူ၌ယုံကြည်ခြင်းမပြည့်စုံသေးသည့်အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
အချက်အလက်များကိုလက်ခံပါကခရစ်ယာန်ဘာသာသည်မိမိ၏ဘာသာရေးကိုဆုံးရှုံးမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ရုပ်ဝါဒီသည်ဘာသာတရားကိုလက်ခံပါကသူ၏အချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အမှန်တရားကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေနေသူသည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအဘယ်အရာကိုမျှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ အမှန်တရားသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူနှင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေသူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လျှင်အခြားသူထံမှအဘယ်အရာကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်နည်း။
အကယ်၍ ဘာသာရေးသမားသည်ရုပ်ဝါဒီများ၏ခိုင်မာသောခဲယဉ်းသောအချက်အလက်များကိုအသိအမှတ်ပြုမည်ဆိုပါကသူသည်ထိုနေရာ၌ရှိသည့်ရုပ်တုများနှင့် ပတ်သတ်၍ သူ၏ကောင်းကင်တံခါးများနှင့်အတူသူ၏ကောင်းကင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံဘဲသူယုံကြည်သောအယူဝါဒများကိုလိုက်နာရန်မလိုသောရန်သူများကိုမီးတောက်လောင်စေခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်များကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သူသည်ရုပ်ပုံများနှင့်အမှိုက်များကိုလောင်ကျွမ်းပြီးနောက်ဂီတစက္ကူသို့မဟုတ်ဖြီးဖြင့် ဖော်ပြ၍ မရနိုင်သောသက်ရှိရှင်သန်မှုရှိနေသည်ကိုသူတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ရုပ်ဝါဒဆန်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ရင်းမှန်သောဘာသာရေးဝါဒီနေရာတွင်အစားထိုးလိုက်လျှင်သူသည်သူ့အားတာဝန်များယူရန်၊ တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရန်၊ သဘာ ၀ စက်ယန္တရားများတပ်ဆင်ရန်စွမ်းအား၊ အလင်း၊ မီးတစ်ခုရှိကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မည် ဤစက်ယန္တရားလည်ပတ်မှု၏အခြေခံမူများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်၊ သူ၏အေးခဲ။ ခိုင်မာသောအချက်အလက်များ၏စိတ်စွန်းကွက်မှုနှင့်မာနထောင်လွှားမှုကိုမီးဖိုချောင်ရန်နှင့် ၄ င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းအသက်ရှင်သော ၀ ိညာဉ်တော်၏အမှန်တရားကိုမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်။
ခရစ်တော်၏အသက်တာသည်နေ၏ခရီးကိုထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်ဟု ၀ န်ခံခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး မျှသာဖြစ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သူ၏ခရစ်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကာအယူဖောက်ပြန်သူဖြစ်လာသည်။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာများကိုယုံကြည်ရန်နှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်နှင့်သူ၏ ၀ ယ်ယူရန် ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောကမ္ဘာသို့ကယ်တင်ခြင်းကိုထုတ်ယူရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် ၀ ိညာဉ်များကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်မည်သည့်ဘာသာရေးကိုမဆိုခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တစ် ဦး မှယုံကြည်သူမရှိ။
အတားအဆီးများကိုဖြိုဖျက်! တစ်လောကလုံးအလင်းပိတ်ပစ်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအားလုံးနှင့်အတူဝေး! ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်နေတစ်ခု၏အလင်းတွင်ရေချိုးပြီးသူ၏ကလေးများသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှစားသုံးကြသည်။ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်လူမျိုးကမျှဤအလင်းကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အားလုံးသည်နေနှင့်အတူတူဖြစ်ကြောင်းအားလုံးအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သို့သော်နေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိဖြင့်သာမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုနွေးထွေးစေပြီးသက်ရှိအားလုံးကိုအရာအားလုံးထဲသို့သွင်းပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေသည်သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မမြင်နိုင်သောနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ မည်သူမျှမမြင်ရသောနေကိုကြည့်။ သေနိုင်သည်။ ဒီအလင်းအားဖြင့်ပစ္စည်း၏ဝိညာဏ်ဝိညာဏ၏ဝိညာဏ်သို့ transmuted ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကားအလင်းနှင့်ဆိုင်သောအရာများကိုလက်ခံပြီးနောက်ဆုံးတွင်သိရှိနားလည်သောအသိပညာနှင့်သေခြင်းမှကယ်တင်သောခရစ်တော်ဖြစ်သည်။
လူများသည်နေသည်၎င်း၏နဂိုရှိသည့်အရာများ၊ ဆုတောင်းမှုများအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲစကြဝicာဥပဒေကိုနာခံခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့်နက္ခတ္တဗေဒသိပ္ပံပညာတွင်လုံလောက်စွာအသိပညာရရှိခဲ့သည်။ ဤဥပဒေအရအာကာသအတွင်းရှိအခြားအရာ ၀ တ္ထုအားလုံးသဟဇာတဖြစ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရံဖန်ရံခါပေါ်ပေါက်လာသောဆရာများသည်ဤဥပဒေ၏အစေခံများသာဖြစ်ပြီး၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းမိသားစုတွင်မွေးဖွားလာခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်များဟုခေါ်ဆိုခွင့်မပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခရစ်တော်၌လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အထူးအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများမရှိပါ။ ခရစ်တော်၏နိယာမဖြစ်သောခရစ်တော်၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ငါတို့မှတစ်ဆင့်အတွေး၊ အပြောအဆို၊ အပြုအမူအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြေငြာမှသာမိမိကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်များအဖြစ်ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။ ကြေငြာခြင်းမပြုပါ၊ ၎င်းသည်အာရုံများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း၎င်းကိုမြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်၊ ထိမိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရာရာတိုင်းကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်စေသည်။ ၎င်းသည်ဝေးလံသောကြောင့်နီးသည်။ ၎င်းသည်ထောက်မခြင်းနှင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်နေသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုမြှင့်တင်ရန်ထိုနေရာတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်းကောင်းသောအတွေးတိုင်းနှင့်လုပ်ရပ်တိုင်းတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်သူရဲတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၊ သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်ပညာရှိတို့၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ခြင်း၊ သနားခြင်းကရုဏာနှင့်တရားမျှတမှုအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သတ္တဝါအားလုံးတွင်၎င်းသည်အသိဉာဏ်ရှိပြီးစည်းလုံးသောနိယာမဖြစ်သည်။
စကြာ ၀ inာရှိအရာအားလုံးသည်သဟဇာတဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဘုံဥပဒေအရလုပ်ဆောင်နေကြသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည့်ဘဝသည်အဆုံးသတ်သို့ပုံပျက်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံနိယာမကိုမျက်ခြည်မပြတ်သောအခါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာများအားလုံးသည်ရှုပ်ထွေးနေပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်နိယာမမှပြန်လာသောအခါကျနော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအရာအဖြစ်မှန်ကမ္ဘာလောကတွင်မနေထိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင်မိုက်နေသည့်လောကတွင်အိပ်ပျော်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငိုက်မျဉ်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအိပ်မက်သို့မဟုတ်အိပ်မက်ဆိုးများကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အမြဲတမ်းအိပ်မပျော်နိုင်ပါ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာနိုးထရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ messenger အချို့ရောက်လာပြီးထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားနိုးကြားစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်ဘဝလုပ်ငန်း၌ပါ ၀ င်ပတ်သက်စေသည်။ ဤသို့နှိုးဆွသောစိတ်ဝိညာဉ်သည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး၎င်းသည်တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အိပ်မက်များ၏အိပ်မက်ဆိုးများကထူးဆန်းစွာရိပ်မိနေသောပြည်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ဒါဟာအိပ်ပျော်နှင့်အိပ်မက်တွေ။ သို့သော်၎င်း၏အိပ်မက်များကိုအရိပ်သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေထဲသို့အတင်းဝင်ရောက်စေမည့်အထိနိုးထမှု၏မှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်နှောင့်ယှက်ခံရလိမ့်မည်။ ၀ တ္ထုအားဖြင့်ပြုလုပ်သောတာ ၀ န်သည်လုပ်သားအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တာဝန်ကိုလိုလိုလားလားဖျော်ဖြေတာဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ခန်းစာရဲ့အမှန်တရားကိုဖျော်ဖြေသူအားပြသသည်။
လူသားတိုင်းသည် messenger၊ မမြင်ရသောနေ၏သားဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၏နိယာမအားဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပသောကမ္ဘာ၏ကယ်တင်ရှင်၏သားဖြစ်သည်။ သူသည်အတွင်း၌ထာဝရအသက်ရှင်လျက်ဖြစ်သောဝိညာဏ်ကိုသူနားလည်သဘောပေါက်။ အတိုင်းအတာအထိနားလည်သည်။ ဤအရာကိုသတိပြုမိသူထံမှကျွန်ုပ်တို့ရှာလိုသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ခရစ်စမတ်ရောက်ရှိခြင်းသည်ထာဝရအသက်သို့ပို့ဆောင်သောတံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အရိပ် - ပြည်၌ရှိနေစဉ်ဤရောက်ရှိခြင်းလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အိပ်ပျော်နေသူအားသူ၏အိပ်မက်များမှနိုးထစေပြီးအနီးအနားရှိအရိပ်များကိုမကြောက်စေနိုင်တော့ပေ။ အရိပ်အရိပ်ဖြစ်မည်ကိုသိသောကြောင့်သူသည်သူ့ကိုအုံကြွ။ လွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။